ရသေ့တောင်မှာ ကင်းစခန်းကို ဝင်ရောက်ပစ်ခတ် ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကုလားချောင်းကျေးရွာနဲ့ တစ်မိုင်လောက် အကွာမှာရှိတဲ့ ပြင်ချောင်း ချောင်းထဲကို ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက် ၁ နာရီလောက်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံအလံ လွှင့်ထူကာ စက်လှေနှစ်စီး ဝင်ရောက်လာပြီး ကုလားချောင်းကျေးရွာ ကင်းအဖွဲ့ကို သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ကုလားချောင်း ရွာခံတစ်ဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
2015 ခုနှစ်မှားနေတယ် 2015 ခုနှစ်ဖြစ်နေပါသည်
Myanmar Government must tell Bangladish Government must take responsible for that matter, because that people is come from Bangladish and try to attack to our country. That is fully responsible from border security from both countries.
မြန်မာ - ဘင်ဂလာဒက်(ရှ်)နယ်စပ်မှာ မြန်မာ့ရေတပ် ကင်းလှည့်ရေယဉ်တွေရော၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေရော အလုံအလောက်ချထားသင့်ပါတယ်။ ဒီကောင်တွေကတော့ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဒုက်ခပေးနေမှာပဲ။ နေရာတိုင်းမှာ သတိရှိဖို့လိုတယ်။ ခံရလိုက်မှ အဘား-အော်လို့မရဘူး။